Makiyi ekuti vaviri vashande | Bezzia
Keys dzekuti vaviri vashande
Maria Jose Roldan | 13/07/2021 23:04 | Hukama
Vanhu vazhinji vane mhanza murudo uye vanowanzo shamisika, chii chakavanzika chevaya vakaroorana vanoshanda zvakakwana uye vane hukama hunogara kwenguva refu. Iko hakuna chaiko dzidziso pamusoro pazvo uye ndezvekuti vaviri vaviri nyika, ine tsika dzayo kana tsika.
Hukama hwese hunofanirwa kunge hwakavakirwa pane dzakateedzana tsika dzinoitisa kuti isashome uye ive yakasimba. Muchinyorwa chinotevera tichaedza kukuudza kuti chii chakavanzika chekuti humwe hukama hushande zvakakwana uye inogara kwemakore nemakore.
Chii chakavanzika chekuti vaviri vashande
Pane kiyi dzinoverengeka, izvo zvinoita kuti imwe hukama igare nekufamba kwenguva uye inoshanda zvakakwana:
Kuvimba nemumwe wako kwakakosha uye kwakakosha kuti igare nekufamba kwenguva. Kana muine kusavimbana pakati pevanhu vaviri, zvakajairika kuti nekufamba kwenguva, hukama hwunodzikira kusvika hwadambuka zvachose.
Kuti vaviri vabudirire uye vasimbe nekufamba kwenguva, zvakafanira kuti vanhu vese vanzwe kuyemurwa kukuru kune mumwe nemumwe. Hunhu hwemudiwa hunofanira kuratidzwa kuitira kuti vanzwe kunzwisiswa uye kudiwa.
Kunzwa kuseka uye kuona hupenyu kubva pane yakanaka maonero zvakare kunobatsira hukama kutora nguva. Hapana chinhu chinoshamisa sekukwanisa kuseka newaunoda.
Tsitsi kukosha kwakakosha mune chero munhu uye muhukama haigone kushayikwa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuzviisa iwe pachako mune shangu dzemudiwa uye unzwe ese avo manzwiro uye manzwiro. Kunzwira tsitsi kunobatsira kusimbisa chisungo uye kubvumira vaviri vacho kuti vakure zvakanyanya kusimba nekufamba kwenguva.
Hukama haugone kugara nekufamba kwenguva kana pasina mhando yekuremekedza chero bato. Kana paine rukudzo, pane kuchengetedzeka uye kuvimba, chimwe chinhu chakakosha kuitira kuti vaviri vacho vasarambana.
Vaviri vacho vanofanirwa kugara varipo, zvese munguva dzakanaka uye munguva dzakaipa. Tsigiro yakakosha kuitira kuti munhu ari mumatambudziko azive kuti haasi ega uye kuti vagokwanisa kuvimba nemumwe wavo chero zvazvingava.
Kunze kwepabonde, kuratidzwa kwerudo uye rudo kunotendera hukama kugadzikana uye kusimba zvakanyanya. Pasina rudo uye pasina rudo, hapana mhando yemudiwa inogona kuchengetedzwa.
Muchidimbu, kune makiyi mazhinji ekuti vaviri vasaite uye vasazorere makore. Kunze kwezvinoonekwa, zvakakoshawo kuti vaviri vacho vashande, kuti vanhu vese vane nzvimbo yavo vega kure nehupenyu semurume nemukadzi. Icho hachisi chinhu chakanaka kushandisa nguva yakawandisa nemumwe wako, nekuti kana izvi zvikaitika panogona kuve neakakosha kupfeka uye kubvarura pairi uye kupedza hukama pachahwo. Usakanganwe kana kuti iwe unofanirwa kuziva kuregerera uye kuisa kudada padivi. Naizvozvi, vaviri vacho vanogona kubudirira nekufamba kwenguva uye kusimba zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Keys dzekuti vaviri vashande
4 zvirongwa zvemazhizha masikati neusiku